wasm3, mpandika WebAss Assembly iray dia mamoaka ny kinova voalohany | Avy amin'ny Linux
wasm3, mpandika WebAss Assembly dia mamoaka ny kinova voalohany
Vao haingana, ny kinova voalohany an'ny wasm3 dia navoaka, izay mpandika teny tena haingana ny kaody mpanelanelana avy amin'i WebAss AssemblySatria namboarina indrindra hampandehanana ny lozisialy WebAss Assembly amin'ny microcontrollers sy ny sehatra izay tsy misy fampiharana JIT ho an'ny WebAss Assembly, tsy dia ampy ny fahatsiarovana ny JIT hiasa, na ny famoronana pejy fahatsiarovana azo tanterahina ilaina amin'ny JIT Implementation.
Ho an'ireo tsy zatra amin'ny WebAss Assembly, tokony ho fantatrao fa izany no izy fiteny ambany Tamin'ny voalohany natao ho endrika kendrena rehefa manangona avy amin'ny C sy C ++, na dia manohana kaody loharano aza ho an'ny fiteny hafa, toa ny Rust sy Go. Ity endrika kaody mimari-drindrina azo entina ity dia ampiasaina amin'ny fanatanterahana ny script amin'ny browser-side browser.
1 Momba ny wasm3
1.1 Andramo wasm3
Momba ny wasm3
Wasm3 dia mandalo fitsapana mifanentana miaraka amin'ny famaritana WebAss Assembly 1.0 sy azo ampiasaina hampandeha fampiharana WASI maro, tsy manome afa-tsy fampisehoana 4-5 heny kely noho ny maotera JIT ary 11.5 heny noho ny fanatanterahana kaody teratany.
Raha ampitahaina amin'ireo mpanakanto hafa avy amin'ny WebAss Assembly (wac, fiainana, wasm-micro-runtime), wasm3 dia 15.8 heny haingana kokoa.
Wasm3 dia nanomboka ho tetik'asa fikarohana ary mitohy amin'ny fomba maro. Ny fanombanana ny moto amin'ny tontolo samihafa dia ao anatin'ny fanadihadiana. Koa satria manana Lua, JS, Python, Lisp, (…) mihazakazaka amin'ny MCU isika, WebAss Assembly dia tena safidy manolo-tena. Manome tontolo iainana mitokana sy voafaritra tsara ary azo vinavinaina tanteraka. Anisan'ireo tranga fampiasana azo ampiharina, azontsika atao ny manisy lisitra ny computing, ny scripting, ny fampiharana IoT, ny fifanarahana blockchain, sns.
Wasm3 mitaky fitadidiana 64Kb ho an'ny kaody sy RAM 10Kb, inona ianao mamela ny hampiasa ilay tetikasa handefa rindranasa voaangona ao amin'ny WebAss Assembly amin'ny microcontrollers toa Arduino MKR *, Arduino due, Particle Photon, ESP8266, ESP32, Air602 (W600), nRF52, nRF51 Blue Pill (STM32F103C8T6), MXChip AZ3166 (EMW3166), Maix (K210), HiFive1 (E310), ary I40gaom , ary koa amin'ny tabilao sy solosaina miorina amin'ny maritrano x86, x64, ARM, MIPS, RISC-V, ary Xtens.
Ny fahombiazana avo dia tratra amin'ny alàlan'ny teknikan'ny Massey Meta Machine (M3) amin'ny mpandika teny, izay, hampihenana ny overhead ny decoding ny bytecode, ny bytecode adika mavitrika amin'ny asa mahomby kokoa izay miteraka kaody milina pseudo sy ny maodelin'ny fanatanterahana ny milina virtoaly mifangaroharo dia lasa fomba fisoratana anarana mahomby kokoa ny asan'ny M3 dia ny C, izay ny hevitrao dia ny fisoratana anarana amin'ilay milina virtoaly, izay azo taratra ao amin'ny fisoratana anarana CPU.
Ny onjam-piasana matetika momba ny fanatsarana dia mivadika ho asa famintinana.
Ankoatra izany, Ny valin'ny fandinihana dia azo jerena ao amin'ny WebAss Assembly amin'ny Internet, aorian'ny famakafakana 948 arivo amin'ireo tranonkala malaza indrindra nomen'ny Alexa, hitan'ny mpikaroka fa WebAss Assembly dia ampiasain'ny tranonkala 1639 (0.17%), izany dia tranonkala 1 amin'ny 600.
Raha atotaly, ireo tranonkala dia nanambara ny mavesatra maodelin'ny WebAss Assembly 1950, izay 150 no tokana.
Rehefa dinihina ny haben'ny WebAss Assembly dia nisy fehin-kevitra diso fanantenana: tamin'ny tranga maherin'ny 50%, WebAss Assembly dia nampiasaina ho an'ny tanjona ratsy, ohatra, ny fitrandrahana vola crypto (55,7%) ary hanafenana kaody amin'ny script maloto (0,2 , XNUMX%).
Ny rafitra miasa ho an'ny Wasm3, afaka mahita Linux isika ao anatin'izany ny router mifototra amin'ny OpenWRT, Windows, macOS, Android ary iOS. Azo natao ihany koa ny nanangona wasm3 tao amin'ny kaody WebAss Assembly antonony mba hampandehanana ny mpandika teny amin'ny browser na amin'ny fampiantranoana tena.
Ho an'ireo izay liana amin'ny fahaizana mampiasa an'ity mpandika teny ity amin'ny rafitr'izy ireo, afaka mijery ny antontan-taratasy ary koa ny kaody momba ny tetikasa izay voasoratra amin'ny C ary zaraina ambanin'ny lisansa MIT, Ao amin'ity rohy manaraka ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » wasm3, mpandika WebAss Assembly dia mamoaka ny kinova voalohany
Mozilla dia mandamina indray ary miala avy hatrany ny mpiasa 70 ao aminy
AMP: Fandraisana an-tsokosoko an'i Google ho fanatsarana ny tranonkala